Ukuthengisa kweHoax? Iibhodi zebhodi yeIvar's Undersea
NgoLwesine, Aprili 18, 2013 NgoLwesithathu, Aprili 17, 2013 UMateyu Schmoldt
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu NgokukaYouTube, iiyure ezingama-72 zevidiyo zilayishwa yonke imizuzu! Abasebenzisi be-Twitter babhala i-tweet ngezigidi ezingama-400 ngosuku. Kwihlabathi eligcwele ingxolo, kunzima ukuba imveliso, iwebhusayithi, okanye inkonzo iviwe. Kunzima ngakumbi xa kungekho nto ikhethekileyo ngokwenyani wentengiso. Yonke imihla, abathengisi bajongana nomceli mngeni wokunyuka ngaphezulu kwengxolo. Ngethemba lokukhuthaza ukuyila, ndiye ku-2009